Chili, igodo ohuru iji luso oke ibu ọgụ - AFRIKHEPRI
Chili, igodo ohuru maka ibu agha
Mkpụrụ obi nke nru ububa: Oge nke ndu m
Lleptin (site na leptos Greek, dị larịị) mgbe ụfọdụ a maara dị ka hormone satiety, bụ homonụ peptide nke na-achịkwa oke nchekwa anụ ahụ na agụụ site na ịchịkwa mmetụta nke satiety. Emepụtara homonụ a site na anụ ahụ adipose nke na mgbakwunye na ọrụ ya na nchekwa na nchịkọta nke ọdụdụ abụba, nwekwara ọrụ dị mkpa nke endocrine. Leptin bụ hormone peptide, nke nwere 167 amino acids ma hụ na oke ụmụ oke.
N'ịbụ onye adipocytes na-emegharị kama ịbụ ụbụrụ endocrine, leptin abụghị hormone onwe ya, mana mmemme nke hormonal na-enye ohere ịhazi ya dị ka ndị dị otú ahụ. Nke a hormone na-achịkwa satiety na metabolism, site na itinye onwe ya na onye na-anabata ihe na hypothalamus. Ogo nke leptin n'ime ọbara na-adabere n'ogo nke anụ ahụ. Mgbe anyị na - eguzogide mmetụta nke homonụ a, anyị ga - enweta ibu. Nzoputa nke leptin gosiputara onwe ya dika odi ka iguzogide insulin, ihe bu uzo ju oria shuga II. N'ihi ya, ụdị shuga II bụ nsonaazụ nke nri dara ogbenye nke nwere shuga na abụba. Mkpụrụ ndụ insulin na-agbakarị insulin iji nweta suga n'ime sel (akwara na imeju), nke ha mechara bụrụ ndị na - eguzogide ọgwụ. Otu ihe ahụ dịkwa maka leptin. Ebe obu na enwere oke abuba n’onye mmadu n’agha, ihe ndi a leptin buru ibu di elu. Nke a na-emebisị mkpụrụ ndụ ndị nwere nsogbu nke a ga-emesị mepụta nguzogide homonụ a.
Ma ndị ọzọ bụ eziokwu. Ndị nwere abụba dị ala nwere obere leptin, ma ha dị ezigbo njọ. Just ghọtala ihe kpatara nri ndị nwere obere kalori na-egbochi oke metabolism gị kpamkpam. Echefula na anụ ahụ bụ igwe na-eme mgbanwe.
A na-ahụ ka mmachi calorie dị ka nrụgide maka ahu ma a gaghị ahụ mmefu ego n'ụzọ dị otú a. Ya mere, ka mmachi ahụ dị mkpa ma ogologo oge ka ọ na-adịkwu, otú ahụ ka ị ga-enwe mgbanwe mmezi ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Chọsie ike na iri nri na ezi ndụ. Nanị iri nri ka mma ga-emetụta ókè ume dị na-abata. Nri ndị siri ike na-abụkarị obere caloric karịa nri dị ụtọ na abụba.
Egwuregwu na nri kwesịrị ekwesị na chilli?
Ngwakọta kachasị arụ ọrụ na chili nwere ike bụrụ ngwa ngwa nri ọhụụ na nke a ma ama maka ike ya ịkwalite metabolism, dịka nchọpụta sitere na otu Mahadum nke Wyoming na United States gosiri. Akụkụ a na - eme ka enwee ike ịmebi oke abụba na yabụ ịlụ ọgụ megide oke ibu.
Ndị na-ede akwụkwọ nwere capsaicin, nke dị na ya na-enyere aka ịlụso uru bara uru ọgụ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-ebuwanye ibu.
Ndị ọrụ nyocha na-atụ aro na nri nri dabere na capsaicin (kemịkalụ a chọtara na ose na -ewe iwe ọkụ) nwere ike iwepu mkpa igbochi iri nri kalori. Omume nke ogige a dị mfe, ọ na-eme ka o kwe omume ịgbanwe “abụba na-adịghị mma” ka ọ bụrụ nke dị mma agba aja aja, dịka ndị ọrụ nyocha ahụ kọwara n’oge ngosipụta ọrụ ha na nzukọ ọgbakọ kwa afọ nke Society Biophysical Society na Baltimore, nke gwụsịrị na February 11.
N'ime ahụ anyị, mkpụrụ ndụ abụba na-acha ọcha na-echekwa ike na mkpụrụ ndụ abụba na-acha nchara nchara na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme maka ọkụ (nke emepụtara combustion abụba) iji gbaa abụba echekwaraotu onye dere ọmụmụ a, Vivek Krishnan kwuru. Ihe mgbakwunye nri nri nke capsaicin na-ewepụ uru dị arọ metụtara oriri nke ihe oriri bara ụba site na njikarị ọnụnọ nke mkpụrụ ndụ aja aja, nke ikike ya na-eme ka o sie ike ịmị abụba n'enweghị nsogbu.
Capsaicin, ezigbo anụ ọkụ ọkụ na ụmụ oke
ọtụtụ ọmụmụ gosipụtara na mbụ na mkpụrụ ndụ ọcha nwere ike ịgbanwe aja aja na ntụgharị, na-abụkarị n'ihi mgbanwe mgbanwe okpomọkụ, mana nyocha sitere na Mahadum Wyoming na-egosi na capsaicin na-eme ka mkpụrụ ndụ abụba na-acha aja aja.
Iji duzie nyocha ha, ndị otu ahụ tụpụtara ezigbo nri nri maka ụmụ oke yana obere ọgwụ capsaicin (0,01%). Vivek Krishnan na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na n'ọnọdụ a, ụmụ oke ezughi ibu n'ihi na ọrụ metabolic ha agbatịla ọsọ. Nsonaazụ ndị ziri ezi maka ihe niile òkénaanị ndị na-enweghị onye na-enweta capsaicin na onye na-enweta vanilloid (nke a na-akpọ TrpV1) bukwara arọ.
Otu a na - arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke mgbakwunye nri site na Capsaicin nke ga - alụ ọgụibu oké ibu. Ndị òtù ya nwere ezigbo nchekwube na iche n'echiche adakarị ọnwụnwa kwesịrị ịmalite n'oge na-adịghị anya. Ndị nchọpụta ahụ etinyelarị akwụkwọ ntinye akwụkwọ maka usoro ha iji wepụta ozuzu n'ime ahụ.
CAPSIMAX * 315 mg / 60 capsules * Ibu ibu (onye na-ere oke, slimming) * Nkwa afọ ojuju ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ * E mere na France
29,00€ dị na ngwaahịa
4 ọhụrụ site na 29,00 €
dị ka Mee 27, 2020 5:22
CAPSIMAX 315 mg / 60 capsules
Onye na-agba ume dị egwu na-agbaze abụba na ume
Ibu ibu (burner fat, slimming)
Nyocha nyocha sitere na nyocha nke nyocha
Emere na France
Ụfọdụ ọgwụgwọ ọdịnala omenala
Mmalite nke mmụọ okpukpe
Intotinye ike nke ugbu a: Ozizi ndị dị mkpa, ntụgharị uche na ...